Wafdi ka socda Midowga Afrika oo la kulmay madaxda Koonfur Galbeed - Halbeeg News
Wafdi ka socda Midowga Afrika oo la kulmay madaxda Koonfur Galbee
Wafdi ballaaran oo ka socda golaha amniga iyo siyaasadda Midowga Afrika ayaa maanta booqasho ku tagay magalaada Baydhaba ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wafdigan oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ayaa safarka ay halkaas ku tageen waxa ay kulamo kula qaateen ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Baarlamanka maamulkaas,mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekhunaa iyo musharraxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee maamulkaas.
Booqashada wafdigan ay ku tageen maanta magaalada Baydhaba waxay qiimeyn buuxda ku sameeyeen xaaladda ammaanka iyo siyaasadda ee gobolka iyo arrimaha doorashooyinka ee dhawaan ka dhacaya magaalada Baydhaba.
Ku simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay kadib kolkii uu kulanka soo gaba gaboobay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin booqashada wafdiga ay ku yimaadeen magaalada Baydhaba.
“wafdiga waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaan ka dhici doonta magaalada Baydhaba, waxaan ku faraxsanahay booqashada ay noogu yimaadeen wafdigan” ayuu yiri Cabdulqaadir Shariif.
Safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Itoobiya ahna guddoomiyaha xilligan ee golaha amniga iyo siyaasadda ee ururka Midowga Afrika, Maxamed Idris Faarax oo isna hadlay ayaa sheegay in safarkooda ay uga gol lahaayeen indha indhaynta xaaladda nabad gelyo ee magaalada Baydhaba oo ay doorasho ka dhaceyso maalmaha soo aaddan.
“Ujeedka aan usoo gaarnay magaalada Baydhaba oo dhawaan ay ka dhacayso doorashada waxa ay tahay sidii aan ugu kuur geli lahayn amniga guud ee magaalada” ayuu yiri safiir Idiris.
“Musharraxiinta aan la kulannay waxaan u sheegnay in doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku dhacdo si nabad galyo ah, annagu haddaannu nahay golaha amniga ee Midowga Afrika waxaan idin kala shaqayn doonnaa sidii ay u dhici lahayd doorasho amnigeeda la isku halleyn karo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay safiir Idiris.
Faransisco Medeira ergayga Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya oo ka mid ahaa saraakiishii Midowga Afrika ee Baydhabo booqatay ayaa sheegay in wafdigooda uu lahaa hal ujeeddo oo ku wada biya shubanaysa qiimeynta ammaanka Koonfur Galbeed Soomaliya iyo dar dar gelinta doorashooyinka loo madlanyahay.
“ Ujeedkayaga aannu kusoo gaarnay aniga iyo wafdigayga magaalada Baydhaba waxa weeye sidii aan wax uga ogaan lahayn amniga magaalada Baydhaba oo dhawaan ay kusoo wajahantahay doorashada madaxweyne ee Koonfur Galbeed Soomaaliya” ayuu yiri danjire Madeira.
Wafdiga ka socda golaha siyaasadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa booqasho ku maraya qaar ka tirsan dowlad goboleedyada dalka sida Baydhaba iyo Beledweyne.
Magaalada Baydhabo ayaa todabaadyadan diyaar garow ballaaran ugu jirtay qabashada tartanka doorashada madaxweyne ee maamulkaas oo billowga bisha ina soo aaddan halkaa ka dhici doonta.
Soomaaliya Kenya iyo WHO oo dib u eegis ku sameynaya ololaha ka dhanka ah cudurka dabeysha